थरुहट आन्दोलनको एक दशक
नेपालको इतिहासलाई पढ्ने हो र समाजलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने थारुहरु राणाकालदेखि समय समयमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । अधिकारका लागि जीवन बलिदानी समेत दिएका छन् । तर नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको लागि, पहिचानको लागि, छुट्टै ‘थरुहट प्रदेश’ को लागि चाहिं थारुहरुले लडिरहेको भर्खर ‘एक दशक’ पुग्दैछ । यो दशकमा पहिचानको आन्दोलन कसरी शुरु भयो ? पछिल्लो सम्भावना के छ ? यी बिषयमा यहाँ सानो चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
बिशेष गरी देशमा बहुदलिय ब्यबस्थाको आगमन पश्चात नेपाली जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए, त्यो पाउन नसकेपछि जनतामा निराशा आयो । काँग्रेस, एमालेले आलोपालो सरकारमा गए, तर जनचाहनाको कदर गर्न सकेनन् । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले बि.स.: २०५२ सालदेखि शुरु गरेको जनयुद्धदेखि थारु, मधेशी, आदिबासी जनजातिहरुमा जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराले घर गर्दै गयो । अहिले पुरातनबादी सोंचलाई अँगाल्न पुग्नु बेग्लै कुरा हो, तर यथार्थमा भन्ने हो भने उत्पीडित जातिहरुलाई सचेत बनाउने काम माओवादीले नै गरेको थियो । ०६२/०६३ को खुल्ला बाताबरण र सत्ताको स्वादपछि मात्रै माओवादी बिगे्रको हो । बिग्रेकै कारण माओवादी नेताहरुका कथनी र करणीमा फरक आउथाल्यो र पछि थारु समुदाय उनीहरुप्रति पनि बिश्वास गर्न सकेन । कुरा ठूलठूला गर्ने र नश्लबादलाई शिरोपर गरी हिंड्ने उनीहरुको बानी पनि परेयो । त्यसैले जनयुद्धमा ठूलो संख्यामा सहभागी भएका उत्पीडित थारु जातिहरु ०६२/०६३ पछि माओवादी आन्दोलनमा सहयोग गर्न आनाकानी गर्न थाले ।
यस्तै बेला २०६३ फागुन २९ गते लक्ष्मण (रोशन), मनोज (अंकित), महान, बली, आकाश, प्रतिक्षा लगायत १६ जनाले माओवादीबाट सामुहिक बिद्रोह गरे । पार्टीबाट कोहि निस्कनु राम्रो होइन, फेरी पनि लक्ष्मण थारुको त्यो बिद्रोहले थारु समुदाय उत्साहित थियो । तर हप्ता दिनपछि लक्ष्मणसहितका बिद्रोहीहरु माओवादीमै फिर्ता भए, यसले समुदायमा निराशा छायो । लक्ष्मण थारु लगायतका ३६ जना थारुहरु पुनः २०६४ बैशाख २१ गते पुनः बिद्रोह गरे । तर यसले थारुहरुमा न त हर्ष थियो न त बिष्मात, किन कि उनीहरु बिद्रोह गरेको हप्तादिनभित्रै फर्केको कुरा सबैको मनमा ताजा थियो ।
माओवादीको राप र ताप त्यति बेला निकै थियो, सेलाएको थिएन । उनीहरु पुलिस, प्रशासन भन्दा बढी सक्रिय थिए । बिद्रोह गर्नु त्यतिबेला दलबाटै खतरा थियो । तर त्यतिबेला लक्ष्मण थारुमा पनि निकै जोश थियो । अर्धभूमिगत जीवन शैली जिइरहेका उनी ०६४ असार १३ गते धनगढीमा पहिलो चोटी खुल्ला रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरे । उनकै अनुरोधमा १६ गते धनगढीमा ‘संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा’को भेला तयारी समिति गठन भयो । २०६४ श्रावण २८ देखि ३० सम्म तीन दिन संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाले पहिलो चोटी थरुहट बन्दको घोषणा गरेयो ।
०६५ माघ २१ गते सार्बजनिक सेवालाई समावेश बनाउने भनी तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी ग¥यो, जसमा तराईका आदिबासी जनजाति, मुश्लिम समेतलाई मधेशी भनी सूचीकरण ग¥यो । फलस्वरुप थारु लगायतका तराईका आदिबासी जनजाति, मुश्लिममा असन्तुष्टी चुलियो । ०६५ फागुन १९ देखि अनिश्चित कालीन आम हडताल शुरु भयो । जुन आन्दोलनमा ४ (चितवनका बिपिन क्षेत्री, कमल चौधरी, दाङ्गका प्रकाश चौधरी र रामप्रसाद चौधरी शहिद) जना शहिद हुन पुगे । राज्यले निरन्तर दमन गर्दै रह्यो । परिणामस्वरुप ०६९ सालमा पनि ठूलो आन्दोलन भयो । राज्य र शासक जातिहरुले थारुहरुमाथि ब्यापक दमन गरे । आन्दोलन भड्केको भए धेरै संख्यामा धनजनको क्षति हुन सक्थ्यो । शासक जातिहरुले धनगढीमा ‘थारु चोर, देश छोड’ भन्ने नारा पनि लगाए । राज्यले हेपे पनि अधिकारको लागि लड्नु पर्दछ भन्ने भावनाको बिकास भैसकेकोले थारुहरु निरन्तर लडिरहे । ०७३ सम्म आइपुग्दा शहिदमा चिन्कु थारु पनि थपिए ।
राज्यको बर्बर दमन जारी रह्यो । फलस्वरुप ०७२ भाद्र ४ गते दुर्गौली गाविसको तोरैयापुरमा (प्रहरी, अखण्डे+थारुहरु) बिचमा घण्टौ झडप भयो । राज्यकै बलमिच्याई र दमनले भाद्र ७ गते ‘टीकापुरमा अप्रत्याशित, अकल्पनीय थारु बिद्रोह’ हुन पुग्यो । राज्यको दमनबिरुद्ध लट्ठी, भट्ठा लिएर थारुहरु निस्के । बिद्रोहमा ८ प्रहरीको ज्यान गयो । गोलीबाट एक बालकको पनि मृत्यु हुन पुग्यो । बालकको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाट भएको हो भन्ने थरुहट आन्दोलनकारीको दाबी छ भने बालकलाई थारुहरुले मारे भन्ने प्रहरीको आरोप छ । हत्या आरोपमा प्रहरीले आन्दोलनमा गएका र नगएका २५ थारुहरुलाई पक्राउ गरी कारागारमा राखेको छ । आगो लगाउने र लुटपात गर्नेहरुलाई आफ्नै सगोत्री भएको कारण छुट दिएको छ ।
यसरी भन्ने हो भने पहिचानको लागि ‘थरुहट आन्दोलन’ भएको अहिले एक दशक पुग्दैछ । पहिचानको लागि, ‘थरुहट प्रदेश’ को लागि निरन्तर आन्दोलन भैरहेको यो पहिलो दशकमा थारुहरुले के पाए र के गुमाए ? समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ ।
के गुमाए ?
हुन त थारुहरुले नगुमाएको कुनै चिज छैन । मान, सम्मान, जिउ, धन सबै । राज्य र शासकहरुले गर्ने अन्याय र अत्याचार त थारुहरुको लागि दाल, भात र तरकारी जस्तै सामान्य हुन पुगेको छ । सत्तासीन दलहरु, उनीहरुका नेताहरु, प्रहरी प्रशासन सबै पहाडबादकै वकालत गरेका छन्, पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीकै हकहितका लागि थारुहरुलाई हेपेका छन्, चेपेका छन्, यातना दिएका छन् । थारुहरुले शान्तिपूर्ण आमसभा गर्न खोज्दा राज्यको आडमा शासक जातिहरुले आम सभास्थल कब्जा गरेका छन, प्रहरी उनीहरुकै सहयोगी भएको छ । मानवअधिकारकर्मी मौन छन्, तमाम पत्रकार राज्यकै वकालत गर्छन् । आम सभामा आउन लागेका थारुहरुको हातमा रहेको लट्ठी प्रहरीले खोस्छ, अखण्ड नामक पाखण्डहरुको हातमा रहेको लट्ठी नदेखेको स्वाङ पार्छ । सगोत्रीहरुले आन्दोलन गर्दा ६ वाट ७ प्रदेश बन्छ । थारु र मधेशीले आन्दोलन गर्दा लट्ठी चलाउँछ, गोली ठोक्छ, निषेधाज्ञा जारी गर्छ, कफ्र्यु लगाउँछ, जेल हाल्छ । त्यसकारण थारुहरुले नगुमाएको चिज छैन, नगुमाएको भए त तराईका मालिक अहिले दासको अबस्थामा रहने थिएनन् । तर यी आन्दोलनकै कारण भएका हैनन्, बिगतकै शासकीय प्रबृत्तिका पुनराबृत्ति हुन्, निरन्तरता हुन् । एमाले, काँग्रेस, माओवादीले बिगतकै नश्लवादलाई शिरोपर गरेको र परिबर्तित समयको जनआकांक्षालाई आत्मसात नगरेको परिणाम हुन्, उपज हुन् ।
थारुहरुले के पाए ?
१. आन्दोलन र बिद्रोहले बिश्व सामु चिनिए थारु :
यहाँसम्म आइपुग्दा थारुहरुसँग गुमाउनका लागि बाँकी के नै थियो र उनीहरु गुमाऊन् । उनीहरु गुमाउनु भन्दा धेरै बढी पाए । थरुहट आन्दोलनको यो पहिलो दशकमा थारुहरु निकै जुर्मुराए । उनीहरु हिनताबोधबाट मुक्त भए । जुन खानपानले थारुहरुलाई शासक जातिहरुले अपमानित गर्थे, त्यही खानपान खुलेआम (घोंघी, गँगटो, बंगुर, मुसाको मासु) जिल्लादेखि राजधानी काठमाण्डौका महोत्सवसम्म गर्बका साथ राख्न सफल भए । जुन भेषभूषा (पहिरन) ले उनीहरु अपमानित महशुश गर्थे, त्यो भेषभूषा (लेहँगा, चोलिया, गोन्या, अँगिया) लाई बजारीकरण गर्न सफल भए, लगाउन, देखाउन सफल भए । हिनताबोधले छोडीसकेका, हराइरहेका उनीहरुका चाडपर्ब, रीति संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सफल भए, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्र जगतमा चिनाउन सफल भए ।
यही दशकमा उनीहरु धेरै अगुवाहरु पाए । हरेक दलमा अहिले थारुहरु केहि संख्यामा अगुवाई गरिरहेका छन् । आन्दोलनले उनीहरु झन झन निखारिंदै गएका छन् । पहिचानको आन्दोलनले उनीहरुलाई एक ढिक्का बनाइरहेको छ । जेलजीवनले नेता हुन नचाहने थारुहरुलाई पनि नेता बन्न सिकाइरहेको छ ।
टीकापुरको थारु बिद्रोहले थारुहरुलाई बिश्व सामु चिनाएको छ । त्यो अकल्पनीय घटना नघटेको भएपनि एमाले, काँग्रेस र माओवादीमा रहेका सामन्तहरु थारुहरुलाई सहजै अधिकार दिंदैनथे, यसमा सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ । तर यसो भन्दा घटना घट्न आवश्यक थियो भनेको अर्थ नलागोस्, थारु समुदाय त्यस्तो कहिल्यै चाहँदैन । यथार्थमा काँग्रेस एमालेको सरकारले थारुहरुमाथि गरेको क्रूर दमन र दमनमा माओवादी नेताको पूर्ण समर्थनले टीकापुरमा अप्रत्यासित घटना निम्तिएको देखिन्छ ।
२. असली अनुहार प्रष्टिएको छ :
दल, नेता, राज्यको असली अनुहार प्रष्टिएको छ । आन्दोलनले दूधको दूध र पानीको पानी प्रष्ट छुट्ट्याएको छ । राज्यले भ्रमित पार्ने प्रयास गरेपनि यतिबेला थारु समुदायका अधिकांश सचेत मान्छे शासक जातिहरुको नश्लबादी चिन्तनबारे स्पष्ट भएका छन् । आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने, हिरासतमै निर्मम यातना दिने, तर सेना प्रहरीकै उपस्थितिमा थारुहरुको घरमा आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेहरुलाई केहि नगर्ने कार्यले नेपाल सरकारको र शासकहरुको असली चेहरा बिश्व सामु उदाङ्गो भएको छ । टीकापुरको घटनाले राजनीतिको र नबुझ्ने मान्छेलाई पनि राजनीति बुझ्ने प्रेरणा दिएको छ । राज्यको जुन ओज थियो, तेज थियो अहिले घटेको छ ।
३. शासक र राज्यको कारण टीकापुर बदनाम :
जनताको आवाजको कदर गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर कतिपय बेला राज्य निरंकुश हुन पुग्छ । निरंकुश राज्यले जनतामाथि अन्याय र अत्याचार गर्न पुग्दछ । जनता राज्यसँग अधिकार माग्दछन् । तर राज्यले अधिकार दिनुको साटो बेवास्ता गर्न थाल्दछ, दमन गर्न थाल्दछ, अनि राज्यसँग जनताको झडप हुन पुग्दछ । लडाई हुन पुग्दछ । थरुहट आन्दोलन र थारुहरुको बिद्रोह पनि कुनै जाति वा समुदायको बिरुद्धमा भएको होइन । टीकापुर घटनामा राज्यका प्रतिनीधिको ज्यान गएको हो, पहाडी समुदायको ज्यान गएको होइन । राज्यमा एकलौटी कब्जा जमाएको कारण त्यहाँ पहाडी ब्राम्हन, क्षेत्रीसँग झडप गरेको जस्तो देखियो । भेद नपाएका जातिबादीहरुले राज्यको दुरुपयोग गर्दै थारुहरुको घर जलाउने, लुटपाट गर्ने, तथानाम गाली गलौज गर्ने कार्य गर्न पुगे । प्रहरी प्रशासनमा जातिबाद हाबी भएका कारण थारुहरुमाथि दुब्र्यबहार गर्न पुगे । तर त्यो दुब्र्यबहारले टीकापुरलाई हेर्ने थारु नजरीया फरक भएको छ । उनीहरुको उपस्थितिमा कमी आएको छ । दुब्र्यबहारमा परिसकेकाहरु टीकापुरको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् । फलस्वरुप टीकापुरको हँसिलो अनुहार अहिले मलिन बन्दै गएको छ ।
४. लड्ने साहसमा बृद्धि :
आन्दोलन र बिद्रोहले थारुहरुलाई अधिकारको लागि लड्ने क्षमतामा बृद्धि भएको छ । उनीहरु बेला बखत अरु दलको आव्हानमा शासक जातिहरुकै लागि लडे । तर यो पहिलो दशकमा उनीहरु आफ्नै लागि लडेका छन् । सदाबहार शासनमा बसिरहेकाहरुलाई चुनौती दिएका छन् । उनीहरु भनिरहेका छन् कि २१ औं शताब्दी समानताको शताब्दी हो, त्यसकारण समान अधिकार देऊ, सम्मानपूर्ण ब्यबहार गर । हरेक अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, सभामा शासक जातिहरुका अन्याय र अत्याचारको बिरुद्धमा बेहिचक, बेझिझक बोलेका छन् । लडाई लामो जान सक्छ भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझेका छन् । उनीहरुको लड्ने साहसमा बृद्धि भएको छ ।
अबको सम्भावना :
यतिबेला देशमा पाँच बिचार हाबी छन् :-
पहिलो धारणा पहाडबादी ब्राम्हन÷क्षेत्रीबादी धारणा हो । जसलाई एमाले पार्टी र काँग्रेसका केहि नेताहरुले अँगालेका छन् । जुन धारणा भन्दछ, ‘तराई नेपालको हो, तर तराईबासी बिदेशी हुन्, त्यसकारण उनीहरुको सीमांकनको माग, समानुपातिक सहभागिताको माग देश टुक्रयाउने माग हो, जुन सम्भव छैन, त्यसकारण थारु, मधेशीहरुलाई दबाएर, पेलेर लानुपर्छ ।’
दोश्रो काँग्रेसका केहि नेताहरु र नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा हो । जुन धारणा भन्दछ ‘थारु, मधेशी, आदिबासी जनजातिहरुलाई पूर्ण अधिकार दिनु हुँदैन, यिनीहरुलाई फकाई फुलाई बिस्तारै गलाउँदै लानुपर्छ, ता कि उनीहरु यथास्थितिमै चित्त बुझाउन् ।’ फोरम लोकतान्त्रिक यसको नजिक छ । उसलाई सरकारमा सामेल गरिदिए पुग्छ । दोहोरो चरित्रको कुरा गर्दै सत्तामा पुगिराख्नु उसको मुख्य ध्येय हो ।
तेश्रो धारणा नयाँ शक्तिको हो । जो पहाड र तराईका जनतालाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्दछ र देशलाई टुक्रा हुनबाट जोगाउनु पर्दछ भन्छ र प्रयास जारी राखेको छ ।
चौथो धारणामा मधेशबादी दलहरु, थरुहट आन्दोलनकारीहरु पर्दछन् । उनीहरुको धारणा धारणा छ, अढाई सय बर्षदेखि तराई पहाडको उपनिबेशको रुपमा रहेको छ, त्यसबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ, तराईलाई पहाडमा नराखी २ वटा प्रदेशमा बाँडिनु पर्दछ, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्दछ, अर्थात सबै जनता नेपाली भएर समान अधिकारसहित सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउनु पर्दछ । तर जब एमाले पार्टी र काँग्रेस, माओवादीका केहि नेताहरुले उनीहरुलाई हँकुवा हाँक्दै लखेट्दै लगातार धकेल्दै छेउसम्म पु¥याउन थाल्दछन्, तब उनीहरुमा तराईलाई स्वतन्त्र पार्न आवश्यक छ भन्ने बिचार पनि मनमा आउन थाल्दछ र आगो भई ओकल्न थाल्दछन् । यो बेलाबखत मधेशी थारु नेताहरुको मुखबाट सुनिन थाल्छ ।
पाँचौ भनेको सि.के राउत बिचारधारा छ, जो शान्तिपूर्ण बिचार प्रबाह गर्दै बिस्तारै छाउँदैछ र स्पष्ट भाषामा मधेश स्वराज वकालत गर्दछ । नेपाली राज्यको उत्पीडनबाट जोगिन मधेश स्वतन्त्र हुनै पर्दछ भन्ने बिचार राख्दछ ।
यी पाँच धारणालाई हेर्ने हो भने जति एमालेबाद हाबी भयो, जति केपी, भीम रावल, शेरबहादुर देउबा, लेखराज भट्टहरु थारु र मधेशीहरुलाई दास सम्झनेछन्, त्यति नै थारु, मधेशी, जनजातिहरुको धारणामा अलगावबाद हाबी हुँदै जाने सम्भावना प्रबल छ । संसारमा दमनले मनलाई जितेको अबस्था छैन, माया प्रेम र भातृत्वले मात्र मन जित्न सम्भब हुन्छ । समग्रमा भन्दा भोलीको दशक, भोलीको समय अझ सोचनीय हुनेछ, किन कि यो धर्तीमा भोली अझ सचेत थारु, मधेशी, आदिबासी जनजातिहरुको आगमन हुँदैछ । तिनले धोती प्रदेशको खुलेआम वकालत गर्नेछन् । पाकेको आँप मात्रै होइन, धेरै काँचो आँप पनि झर्न तयार हुने सम्भावना बढ्दैछ ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने देशमा रहेका उत्पीडित जातिहरु (थारु, मधेशी, आदिबासी जनजाति, मुश्लिम, पिछडा बर्ग) पहिले यो वा त्यो नाममा अरुको लागि आन्दोलन गरे । बि.स.: २०६२/६३ को आन्दोलनपछि उनीहरु आफ्नो लागि आन्दोलन थालेका छन् । बाह्रबुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौताका सारभूत कुरालाई, तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका कुरालाई लागू गरेको भए शायद देशमा अहिलेको अबस्था आउँदैनथ्यो होला । तर राजतन्त्रलाई फाल्ने र पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको जातिय राज्यलाई अझ संस्थागत गर्ने काँग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्ष नेताहरुको भित्री चाहनाले गर्दा देश नराम्रो दलदलमा फँस्न पुगेको छ । राज्यका तमाम कोशिशका बाबजुद पनि अहिले उत्पीडित जातिहरु एक हुँदैछन्, संघीय गठबन्धन त्यसैको एक उदाहरण हो । थारु र मधेशीको मुद्दा पनि अहिले एक भएर आएको छ, संयुक्त रुपमा आवाज बुलन्द भैरहेको छ ।
भोलीको दिनमा एमालेको यही अतिबाद रहिरह्यो भने मधेशबादी दल र सि.के. राउतको एक आवाज नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण दलदलबाट निकाल्ने हो भने एमालेहरु, काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले तराई नेपालको हो र त्यहाँका आदिबासीहरु, बासिन्दाहरु बिदेशी हुन् भन्ने भावनालाई त्याग गर्न सक्नु पर्दछ । उनीहरु नेपाली हुन्, उनीहरुको पनि चाहना छ, अधिकार छ, सीमाको रक्षा उनीहरु गरिरहेका छन् भनी सम्मान गर्नुपर्दछ र आवाजको कदर गर्नुपर्दछ । यसैमा देश र जनताको कल्याण छ । धन्यबाद !
थरुहट आन्दोलन र अबको निकास
थरुहट आन्दोलन यत्तिबेला छैठौं महिनामा प्रबेश गरेको छ । छैठौं महिनामा आइपुग्दा यसको गति अलि धिम भएको छ, तर आन्दोलन रोकिएको छैन । आन्दोलनका नायकहरु यसलाई दीर्घकालीन आन्दोलनको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् र त्यही अनुरुपको योजनामा लागेका छन् भन्ने कुरा बुझिएको छ । उसो त थारुहरुको आन्दोलन राणाहरुको पालादेखि भएको देखिन्छ । पंचायतकाल, बहुदलकालमा पनि थारुहरुले आन्दोलन गरेको देखिन्छ । यसरी समय समयमा थारुहरुको माग मुद्दा उठ्दै गरेको र कहिले आश्वासन र कहिले राशन प्राप्त गरी आन्दोलन सकिएको इतिहास छ ।
पछिल्लो चरणमा ०६३ सालमा भएको मधेश आन्दोलनपछि थारु बहुल रुपमा रहेको जिल्लाहरुको अलग प्रदेश हुनुपर्छ, मधेशी र थारुहरुको कतिपय कुरा मिलेपनि पहिचान फरक हो, अलग अलग समुदाय हुन् भनी थारुले ईमान्दारीका साथ आन्दोलन थालेका थिए । तर पहाडी राज्य र शासकहरु त्यसलाई मधेशीहरुको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । थारुहरुको त्यो आन्दोलनले सब भन्दा पीडित मधेशी समुदाय भएको थियो किन कि उसलाई ‘भाई फुटे, गवाँर लुटे’ भन्ने उखान मज्जाले थाहा थियो । आज ढिलै भएपनि नेपाली शासकहरुको त्यो बदनियत अधिकांश थारु, मधेशी, आदिबासी जनजाति, मुश्लिम, दलितबिच प्रष्ट भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनितमाम कारण छन्, जसको कारण उत्पीडित जातिहरु अहिले पनि थिचोमिचो, अन्याय र अत्याचार सहन परिरहेको छ र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनले उपलब्धि हात पारिरहेको छैन । यहाँ केहि कारणबारे सानो चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक भनाउँदा काँग्रेस होस् वा सर्बहारा बर्गका नेतृत्व गर्ने भनिएका कम्युनिष्ट होउन्, सबैको सोंच उत्पीडितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर हैन, दमन गरेर शासन गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा उनीहरुको असली चेहरा उदाङ्गिएको छ । लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन्, संघीय शासनमा जाँदा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ, जुन संरचनाले जनतालाई सन्तुष्टी दिन सक्तैन, त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने सोंच कुनै दलमा आएन । उनीहरु राणा र शाहहरुको जहानिया शासन÷पारिवारिक शासनको अन्त्य र ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको नश्लबादी राज्य÷शासनको स्थापना गर्नु नै आफ्नो मूल उद्देश्य ठाने । बामपन्थीहरुको भाषामा यदि भन्ने हो भने काँग्रेस, रा.प्र.पा जस्ता पार्टीको लागि त्यो शोभनीय कुरा हुन सक्थ्यो, तर दुःखको कुरो आफूलाई सर्बहारा बर्गको नेतृत्व भनाउने नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको लागि पनि त्यो नै मूल उद्देश्य हुन पुग्यो, जुनदेशको लागि खतरनाक कुरा हो । यसले देशलाई अग्रगतिमा लाँदैन, भलै सामन्ती सरकार÷राज्यद्वारा पालित पोषित मिडियाहरुले त्यसको भरथेग वकालत गरुन् र उत्पीडित जातिहरुको खोइरो खनून् । अहिलेको दुनियामा त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन ।
त्यसैगरी उत्पीडित जातिहरुका अगुवाहरुको सोंचमा पनि परिबर्तन आउन सकेन । उनीहरु दासको, चाकरीको जिन्दगी जिउनमै खुशी छन् भने पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरु पहुँचको जिन्दगी, सामन्तको जिन्दगी, दाताको जिन्दगी बाँचिरहन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । राज्यको बनावटले उत्पीडित जातिहरुलाई मगन्तेको रुपमा, दासको रुपमा प्रस्तुत हुने र पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्री नेताहरुलाई दाताको रुपमा, सर्बशक्ति सम्पन्न र ज्ञाताको रुपमा प्रस्तुत हुन लगाइरहेको छ । जुन कुरा लोकतन्त्रको र देशको लागि घातक छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको अबस्था कस्तो हुन्छ ?राज्य कस्तो हुन्छ ?राज्यको दायित्व के हो ? न्याय भनेको के हो ? भन्ने कुरा दुबैथरीले नबुझ्दा, सोंचमा परिबर्तन नहुँदा थरुहट आन्दोलनले सोंचे जति उपलव्धि पाएको छैन । सोंचमा परिबर्तन आउन नसकेको कारणले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
मागमुद्दा, सवालबारे स्पष्ट नहुनु
त्यसैगरी थारुहरुका धेरै अगुवा थारुहरुको अधिकार, मागमुद्दा, सवाल के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छैनन् । पहाडबादी दलहरुका पहाडी नेताहरुले थारुहरुको इतिहासलाई तोडमरोड गर्दा कथित थारु नेताहरु चुपचाप बस्छन् । चूपचाप बस्नु भनेको उनीहरुको दाबीलाई स्वीकार गर्नु हो । दाबीलाई स्वीकार गर्नु भनेको अधिकारबाट बञ्चित हुनु हो । पूर्बी तराई होस् वा पश्चिम तराई, थारुहरु तराईको आदिबासी हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । सरकारले औलो उन्मूलन अभियान लागू गरेदेखि नै थारुहरुको पनि उन्मूलन शुरु भएको कुरा संसारलाई थाहा छ, तर दास थारु अगुवाहरु उनीहरुको सामन्त नेताहरुले तराईका आदिबासी आफूलाई दाबी गर्दा समेत बिरालोदेखि मूसा तर्सेझैं तर्सन्छन् । जुन समुदायको लागि राम्रो होइन ।
त्यसैगरी थारुहरुको मुख्य माग सीमांकन हो, थारुहरुलाई धेरै टुक्रामा बिभाजित हुनबाट रोक्नु हो, जनसंंख्याको समान अनुपातमा राजनीतिक दल, राज्यको हरेक निकायमा सहभागिता प्राप्त गर्नु हो, जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र तय गराउनु, ब्यस्थापिका संसद, राष्ट्रि«««य सभामा तराईबाट समान प्रतिनीधित्व गराउनु आदि हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छैनन् । स्पष्ट नभएकै कारण थारु र मधेशीहरुको आशाको केन्द्र मानिएको बिजयकुमार गच्छदारको पार्टी सरकारमालहसिन पुगेको र थरुहट आन्दोलनमा शिथिलता आएको देखिन्छ । उसो त एमाओवादी पार्टी सरकारमा गएको कारण पनि केहि समस्या भएको हो । तर बामपन्थी भएपनि त्यो पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको पार्टीमारुपान्तरण भैसकेकोले थारुहरुलाई त्यसबाट समस्या परेको होइन, समस्या परेको हो फोरम लोकतान्त्रिकबाट । संबिधान घोषणासम्म सरकारमा नरहेको, संबिधानमा हस्ताक्षर नगरेको पार्टीले संबिधान कार्यान्वयन गराउने सरकारमा सामेली भई संबिधान कार्यान्वयन गराउन थाल्दा थारु, मधेशी आन्दोलनलाई धक्का पर्छ नै । त्यसैले बिजय गच्छदारअज्ञानताको कारणले सरकारमा गए वा सत्ता लिप्साको कारणले गए, समुदायलाई जवाफ तिनैले दिउन्,तर यसले उत्पीडित समुदायलाई नै घाटा भएको छ । तर प्रचण्ड चाहिं सुनियोजित तरीकाले ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको नश्लबादी सामुदायिक शासनलाई संस्थागत गर्नकै लागि सरकारमा गएका हुन् र सफलता पाएकै हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । उनकै सहमति र सहयोगले थारुहरुलाई मास्ने राणाकालीन अभियानले निरन्तरता पाएको छ ।जुन कार्य गर्न, एमाले र काँग्रेस चाहिरहेका थिए, उनको चाहना पुरा भएको छ ।सतहमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अलिअलि बैचारिक भिन्नता देखिए पनि त्यो देखावटी मात्र हो । उनीहरुको गुदी कुरो, उद्देश्य भनेको नेपालमा राणा र शाहहरुको पारिवारीक शासनको स्थानमा ब्राम्हन र क्षेत्रीहरुको सामुदायिक शासनलाई संस्थागत गर्नु थियो र सफल भए पनि । यस्तो चतुराई गर्नमा प्रचण्ड माहिर मानिन्छन् । प्रचण्डसँग मान्छेको दिमाग भुट्ने, आफ्नो अनुकुल बनाउने खुराफाटीबशीकरण मन्त्र छ । जुनबशीकरण मन्त्रको शिकार भएका छन् भोलेबाबा गच्छदार । बशीकरण मन्त्रकै प्रभावले थरुहट आन्दोलनले सफलता पाउने पाउने बेलामा उनी भलाबुरा थाहा पाउन सकेनन् र ८ बुँदे सहमतिको घनचक्करमा परे । घनचक्करले सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्साका कतिपय नेता कार्यकर्ता निराश हुन पुगे, पार्टी नै परित्याग गरे, जुन कटु सत्य हो । कतिपय नेता र कार्यकर्ता कारागारभित्र रहेका छन्, कतिपय भागी भागी फिरीरहेका छन्, तर ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । घनचक्करको फन्को कहिलेसम्म मार्ने हुन् ? फन्को मार्ने समय सीमा कति हो ? कसैलाई थाहा छैन । बशीकरण मन्त्रको प्रभावबाट गच्छदार कहिलेसम्ममुक्त हुन्छन् ? त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन ।
जुन संबिधान र सीमांकनको बिरोधमा मधेशी, थारु, मुश्लिम, जनजाति, दलित आन्दोलनमा छन्, ५० औं को संख्यामा शहादत प्राप्त गरेका छन्, त्यही संबिधान पढाउन बाबा गच्छदार पनि सरिक भएका छन् । आफ्नैको बिरुद्धमा कसरी लागियो भन्ने कुराको पनि होश छैन । टुक्रा टुक्रामा बिभाजित थारुहरुको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चिता सम्भव छैन भन्ने कुरासम्मको ज्ञात रहेन । यसरी थारु अगुवाहरु थारुहरुको माग, मुद्दाबारे स्पष्ट नभएका कारण पनि अहिलेको अबस्था सिर्जना भएको छ ।
राज्य आतंक र दमन
त्यसैगरी राज्यको आतंकले पनि थारुहरुको आन्दोलनलाई केहि मत्थर बनाएको छ । थारुहरुलाई दमन गर्ने चलन नयाँ होइन । पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै यो जारी छ । केवल तौरतरीका मात्रै फरक छ । राणाकालमा भाई भारदार, आसेपासे, चम्चेहरुलाई तराईको जग्गा बिर्ता दिने, थारुहरुमाथि अन्याय र अत्याचार गर्ने र गर्न लगाउने, थारुहरुलाई मासिन्या जातिको रुपमा राखेर, कानुनै बनाएर मास्ने अभियान चलेको थियो । पंचायतकालमा बिशेष गरी औलो उन्मूलनपछि राजा महेन्द्रले पहाडको बस्ती तराईमा ल्याउने, प्रहरी प्रशासन लगाएर दुःख दिने, कानुनको हवाला दिंदै जग्गा जमिन हडप्न लगाउने काम भयो । प्रहरी, प्रशासन, कानुन देखाई आतंकित पार्ने, बिस्थापित गर्ने, अल्पमतमा पार्ने काम गरियो । सहभागिता गराउने कामको सट्टा थारुहरुलाई राज्यको कुनै पनि निकायमा अप्रत्यक्ष एवं अघोषित रुपमा प्रबेश निषेध गरियो ।
आजको कथित गणतन्त्रमा पनि तात्विक भिन्नता केहि छैन । थारुहरु दासको दासै छन् । अखण्डको नाउँमा पाखण्ड गर्जेको छ । पहाडीहरुको राज्यमा थारु र मधेशीलाई अधिकार छैन, स्थान छैन । दलको उपल्लो पद होस् वा पुलिस प्रशासन, अड्डा अदालत होस्, सबै ठाउँमा अघोषित रुपमा थारु, मधेशी, दलित, जनजातिहरुलाई प्रबेश निषेध छ । यतिबेला तराईमा थारु, मधेशी, दलित, मुश्लिम पुलिस भएको भए, राज्य उनीहरुको भए, पार्टीमा नेता उनीहरुको भए न त टीकापुर घटना हुने थियो, न त ५० औं मधेशी शहादत प्राप्त गर्ने थिए । न त पुलिस, सेनाको उपस्थितिमा थारुहरुको घरमा आगो लगाउने र लुट्ने कार्य हुने थियो । न त थारु र मधेशीहरुलाई बिखण्डनकारीको आरोप लाग्ने थियो । जहाँ राज्य आफ्नो हुँदैन, त्यहाँ उसको प्रस्तुती क्रूर हुन्छ । त्यही क्रूरताको शिकार अहिले मधेशी र थारु भएका हुन् । कर्णाली, सुर्खेतको आवाजसहजै सुनिनु र थारु, मधेशीहरुको आवाजलाई क्रूरतापूर्बक दमन गरिनु त्यही सिद्धान्तमा आधारित छ ।
टीकापुर घटनापनि पहाडी राज्यको दमनको कारणले परिस्थितिबश उब्जिएको दुःखद घटना हो, सबैलाई थाहा छ, तर राज्यको गल्ती ढाकछोप प्रयास जारी छ ।०७२ श्रावण २१ गते धनगढीमा मधेशी नेताहरुको कार्यक्रम कैलाली जिल्ला बिकास समितिमा थियो, तर बिथोलियो । त्यो, अखण्ड पक्षधरको नाउँमा प्रहरीले असहयोग गरेको कारणले बिथोलिएको थियो । धनगढीमा हुने थरुहट आन्दोलनकारीहरुको शान्तिपूर्ण नारा, जुलुसलाई प्रहरीले जिल्ला प्रशासन भन्दा पश्चिम जान नदिने र अखण्ड पक्षधरलाई पुरै बजारमा नारा जुलुस गर्नछुट थियो । श्रावण २२ गतेदेखि यो कार्य लगातार भैरहेको थियो, जसले थारुहरुमा आक्रोश थप्दै गइरहेको थियो । अखण्ड पक्षधरले आन्दोलन रोकेको बेला थरुहट पक्षधरले श्रावण ३२ गते धनगढीमा आम सभा ग¥यो । आम सभामा आउने थारुहरुमाथि ढुङ्गा मुढा बर्साइयो । प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक भई बस्यो । यसले पनि थारुहरुमा आक्रोश थप्ने काम भयो । अखण्ड पक्षधरलाई सहयोग र थारुहरुलाई दमन गर्ने प्रहरीको नीतिलाई दृष्टिगत गरी धेरैले अनुमान लगाइरहेका थिए कि कुनै पनि बेला समस्या बढ्न सक्छ, झडप हुन सक्छ । त्यही समयमा जानी जानी अखण्ड पक्षधरले भदौ ४ गते धनगढीदेखि टीकापुरसम्म मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गरे । थारुहरुले तोरैयापुरमा अवरोध सिर्जना गरे, झडप हुन पुग्यो । दुबै पक्षका जिम्मेवार नेताहरुलाई राखी गम्भिर छलफल गराउनु कता हो कता पुलिस फेरी पनि दमनकै नीति अनुरुप त्यही दिनदेखि टीकापुरमा निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । स्थानिय निकायमा थरुहट थारुवान स्वायत्त प्रदेश लेख्ने केन्द्रीय निर्णय अनुरुप भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारीहरु२० औं हजारको संख्यामा टीकापुर पुगे । दमनकै नीति अनुरुपप्रहरीले अश्रु ग्याँस, गोली छोडेपछि धेरै मान्छे घाइते हुन पुगे । परिस्थितिबशआक्रोशित मास पनि प्रहरीमाथि खनियो र टीकापुरको दुःखद घटना हुन पुग्यो । परिस्थितिबश घटेको घटनाले राज्य संयमता गुमायो । अखण्ड पक्षधरले राती आगजनी र लुटपाट शुरु गरे, प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बनिरह्यो । ८ गते बिहानदेखिपुरै दिन कफ्र्युको बिचमा पुलिस र सेनाको उपस्थितिमा थारुहरुको घर जल्यो, लुटपाट गरियो । ७ गतेको घटनालाई लिएर प्रहरीले५८ जना थारुहरुमाथि मुद्दा दायर ग¥यो । २२ जना थारुलाई समात्यो, तर ७ गते साँझ र ८ गते दिउँसभरी थारुहरुको घरमा आगो लगाउने र लुटपाट गर्नेलाई प्रहरीले केहि गरेन । अहिले पनि गर्न मानिरहेको छैन, बिभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको छ । थारु बस्तीमा अहिले पनि राज्य आतङ्क मच्चिएको छ । थारु अगुवाहरुलाई तर्साउने काम भैरहेको छ । यसले पनि थरुहट आन्दोलनमा समस्या पारेको छ ।
त्यसैले अहिलेसम्मको अबस्थालाई हेर्ने हो भने देश झन झन दलदलमा फँस्दै गइरहेको छ । सरकार ओलीको छ । ओलीको बोली, बन्दूकको गोली भएको छ, निस्क्यो कि लाग्यो थारु, मधेशी, जनजातिको मुटुमा । रोकिने अवसरै छैन । यस्तो अबस्थामा काँग्रेस, एमाओवादीले अब दहिच्युरे नीतिलाई छोड्नु पर्दछ । थारु, मधेशीहरुको माग ठिक छैन भने कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन एमालेलाई सुझाव दिनुपर्दछ । देश तिम्रो भएपनि राज्य पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको हो, यसमा थारु, मधेशी, मुश्लिमको केहि चल्दैन भनी स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नु पर्दछ र खुलेरै सहयोग गर्नुपर्दछ । केहि नेताले एमालेलाई समर्थन गर्ने र केहिले गाली गर्ने, केहिले सीमांकन हेरफेर गर्ने सातबाट आठ प्रदेश बनाउन सकिने गफ दिने र केहिले यो सम्भब छैन भन्ने बेबकूफी तालले देश चल्दैन । त्यसैगरी थारु, मधेशी, जनजाति, मुश्लिम, दलितहरुको अगुवा भनाउँदाहरुले पनि उत्पीडित जातिहरुको समस्या सरकारमा गएर समाधान हुन्छ वा आन्दोलनबाट ? स्पष्ट खुट्याउन सक्नु पर्दछ । थारु र मधेशीहरुको मुख्य माग, आवश्यकता के हो ? मुख्य माग÷आवश्यकता ठूलो कि सरकार ठूलो ? स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ र एक बाटो रोज्न सक्नु पर्दछ ।
सरकारमा पनि छु आन्दोलनमा पनि छु, दमन गर्ने सरकार पनि ठिक हो, आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी पनि ठिक हुन्, संघीयताबिरोधी माग पनि ठिक हो, संघीयताको माग पनि ठिक हो । सदाबहार शासन गर्ने पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको उत्पीडितहरुलाई दमन गर्न पाउँ भन्ने माग पनि ठिक हो, अन्याय, अत्याचार, दमनबाट मुक्ति पाउँ भन्ने उत्पीडित जातिहरुको माग पनि ठिक हो । उत्पीडित मारा संबिधान पढाउने सरकारी कार्य पनि ठिक हो, सरकारी भ्रमको भण्डाफोर गर्ने कार्य पनि ठिक हो भन्ने जस्ता गाँजेमाजे काम कुराले अब देशले निकास पाउँदैन । न त काठमाण्डौमा बसेर आन्दोलन हुन्छ । त्यसैले देशलाई निकास दिने हो भने सदाबहार शासन गर्नेहरु र सदाबहार दासत्व स्वीकार गर्नेहरु आ—आफ्नो भूमिकाप्रति स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
पहिलो दमन गर्ने भूमिकावालाले दमनबाटै आन्दोलनकारीलाई शान्त पार्न सक्नुपर्दछ, मरमूलाहिजा हेर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय के भन्छ ? संयुक्त राष्ट्र संघ के भन्छ ? सोच्नु हुँदैन र संसारलाई देखाइ दिनुपर्छ कि नेपालका पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्री कहिल्यै कसैको सामु शिर झुकाउन जानेको छैन । राज्य उनीहरुको बपौती हो र बपौती रहन्छ । दोश्रो राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएकाहरु, अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरु, आन्दोलनमा होमिएकाहरुले दमनकारी राज्यलाई ईंटको जवाफ पत्थरले दिन सक्नु पर्दछ । उनीहरुलाई मात्रै होइन, संसारलाई भन्न सक्नु पर्दछ कि अबका दिनमा राज्य पहाडी ब्राम्हन÷क्षेत्रीहरुको मात्रै बपौती हुन सक्तैन । राज्य सबैको साझा हुन्छ, समान सहभागितामा चल्छ । अबका दिनमा राज्य थारु, मधेशी, जनजाति, मुश्लिम, दलित, उत्पीडित सबैको साझा बन्छ र देखाई दिनु पर्दछ, उत्पीडितहरुमा पनि शासकबिरुद्ध लड्ने क्षमता छ भन्ने कुरा । तेश्रो भनेको दुबै पक्ष गम्भिर भएर बार्ताको थालनी गर्न सक्नुपर्दछ । देशमा सबैको समान अधिकार, समान सहभागिता, सबैको जीत, सबैको सम्मान, सबैले गौरब गर्ने बाताबरणको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । थारु, मधेशी, जनजातिको माग सम्बोधन गर्नुपर्दछ । बिखण्डनकारीको आरोप लगाउन छोड्नु पर्दछ । सबैको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । सहमति गर्नुपर्दछ र देशलाई निकास दिनु पर्दछ । यदि यसो गर्न सकिएन भने सबैको हार सुनिश्चित छ । सबैलाई चेतना भया ।
आमा हुन सजिलो छैन। आमा बन्नु मृत्युको नजिक पुग्नु हो। आमा बन्नुको अर्थ मृत्युलाई जित्नु हो। मृत्युलाई जित्नु सामान्य कुरा होइन। त्यसका लागि अदम्य साहास चाहिन्छ। त्यो साहास केवल एउटी आमामा मात्र निहीत हुन्छ। महिलाले बहन गर्ने विभिन्नथरीका भूमिकामध्ये सबैभन्दा सम्मानजनक भूमिका आमा नै हो। महिलाका लागि प्रयोग गरिने सबैभन्दा वजनदार शब्द पनि आमा नै हो। आमा धर्ती हुन्, आमा शृष्टि हुन्। आमा सौन्दर्य हुन्, आमा रहस्य हुन्। एउटै शरीरमा दुईटा ढुकढुकी जीवित राख्ने, आमा आश्चर्य हुन्।
आमा हुन सजिलो छैन, त्यसमा पनि एउटी महिलालाई आमा हुन झनै गाह्रो बनाइदिन्छ हाम्रो समाजले। आमा हुनु सम्मानजनक त छ तर छोराको आमा हुनु जति सम्मानजनक छ, छोरीको आमा हुनु त्यतिनै अपमानजनक पनि। त्यसैले आमाहरु सम्मान पाउनका लागि छोराकै चाहना गर्छन् पनि। छोरो त पैतृक सम्पत्तिको हकदार पनि त हो नि। घरको (जनावरीय आमा) गाई भैँसीले पाडी जन्माउँदा, बाख्रीले पाठी जन्माउँदा मनभरी र अनुहारभरी खुसी बोक्नेहरु, मानवीय आमाले छोरी जन्माइन् भने धुरुधुरु रुन्छन्। अनि अर्को पटक त पक्कै छोरा जन्मिन्छ भनी चित्त बुझाउँछन्। मरेपछि कहिल्यै कसैले नदेखेको स्वर्ग जानका लागि भए पनि आमाले छोरा जन्माइदिनपर्ने हुन्छ। छोरा नजन्मेसम्म बच्चाहरु जन्माइरहनपर्ने आमा, अब आमा रहँदिनन्, बच्चा उत्पादन गर्ने उनी मेशिन बन्छिन्। छोरा नजन्मेसम्म धेरै छोरीहरु जन्माइरहनुको पीडा ती आमाहरुसँग छुट्टै हुन्छ। यद्यपि छोरी जन्मनुमा एउटी आमाको भन्दा उनको विपरित लिंगी बढी जिम्मेवार हुन्छ। तर भोग्नपर्ने केवल आमाले। छोरो जन्मिए पनि ठूलो भएर छोराले राम्रो काम गरे, ऊ वीर पिताको छोरा कहलिन्छ, तर नराम्रो काम गरे राडीको छोरा कहलिन्छ। यदि केही गरी छोरो जन्मिएन भने अब आमाले आफ्नो भाग्य धिक्कार्दै सौता स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
आधुनिक जमानामा एक छोरा एक छोरीसहितको खुसी परिवारको नारा निकै लोकप्रिय छ। तर एक छोरा एक छोरी, बनाउने कसरी? फेरि भोग्ने पालो आमाकै त हो। ठ्याक्कै एक छोरा एक छोरी बनाउनका लागि अधिकांश आमाहरुले पीडा भोग्न पर्छ। आमा हुन कहाँ स्वतन्त्रता छ र? आमा हुन या नहुनका लागि निर्णय अरुकै चल्छ। गर्भ आमाको रहन्छ, शिशु जन्माउँदाको पीडा आमाले सहनुपर्छ तर पनि उनको केही चल्दैन। आमा कहिले बन्ने, कति बच्चाको आमा बन्ने, बच्चाबीचको ग्याप कति राख्ने, कुनै पनि कुरामा आमाको रत्तिभर पनि चल्दैन। आमा हुनु तर अरुको चाहानामा, कति दुःखद छ। दूरदराजका विकट क्षेत्रका बाह्रखरी नजान्ने आमाहरुले त पत्तो नै पाउँदैनन् उनको आफ्नो गर्भमा उनकै पूर्ण स्वतन्त्रता रहनपर्छ भन्ने कुरा।
आमाको चाहना होस् या नहोस्, गर्भमा छोरी छ भनेर अर्को आमा बन्ने सम्भावना बोकेकी छोरीलाई यो दुनियामा आउनु पहिलेनै मारिन्छ। विवश र लाचार आमा आफ्नो श्रीमान र घरपरिवारको लागि सबैथोक चुपचाप सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ, आफ्ना इच्छा चाहना सपना सबैको वेवास्ता गर्दै। र, पनि आमालाई विवश पार्ने पाखण्डी ढोंगीहरुले लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, दुर्गा माताको पूजा गर्छन्, आफ्ना इच्छा आकांक्षा सपनाहरु पूरा होस् भनि।
श्रीमान् बिनाको आामा हुने कुरा त कोही एउटी पनि महिलाले कल्पनासमेत गर्दिनन् होला हाम्रो जस्तो समाजमा। यदि कोही श्रीमान् बिनाको आमा (विवाहपूर्व) भइहाल्छिन् भने बुझ्नुपर्छ उनको विपरित लिंगीले ढोखा दियो। श्रीमान् भएकी आमाले जति सम्मान पाउँछिन् यो समाजमा, श्रीमान् बिनाकी आमाले कैयौँ गुणा बढी अपमान पाउँछिन्। सम्भवत उनलाई श्रीमान् बिनाको आमा बन्नै दिइँदैन। कतिपय श्रीमान् बिनाका गर्भवती महिला आमा नै नबनी आत्महत्या गर्छन्। केही गरी आमा बनिहाले पनि ती आमाले भोग्ने अपमान, बेइज्जती, लान्छनाको कुनै सीमा हुँदैन। एक्ली आमा, एक्लैले बच्चालाई जन्म दिन्छिन्, एक्लैले बच्चाको स्याहार सुसार गर्न, हेरचाह गर्न सक्षम भए पनि, किन उनको ढोखेबाज विपरित लिंगी उनको साथमै रहनुपर्ने? र, नहुँदा किन अपमान सहनपर्ने? आमा त आमा हुन्, उही माया उही ममता उही क्षमता भएकी। फेरि किन एक्ली आमालाई दुनियाभरिको अपमान।
आमा बन्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ। महत्वपूर्ण कुरा त सम्मानित आमा बन्नुरहेछ। सम्मानित आमा बन्नका लागि श्रीमान् हुनु पहिलो शर्त, हाम्रो जस्तो समाजमा। त्यतिले मात्रै पनि सम्मानित आमा हुन नसकिने, छोराकै आमा बन्न पर्यो। आमा हुन कठिन छ। त्यसै आमा बन्न सकिँदैन। आमा हुन यो समाजले निर्धारित गरिदिएका थुप्रै नीति नियम छन्। जति पनि नियम छन्, आमालाई उनको विपरित लिंगप्रति परनिर्भर बनाउने खालका छन्। आमालाई श्रीमान् को साथ हुनैपर्ने उनी जीवित रहेसम्म, आमाले छोरो जन्माउनै पर्ने, र यति गर्न नसके आमा केवल शब्दमा सम्मानित हुन्छिन्।
आमा हुन गाह्रो छ, त्यसैगरी आमा हुन नसक्नु पनि गाह्रो छ। आमा हुन सक्नुभन्दा आमा हुन नसक्नु झनै बढी गाह्रो छ। महिला भएर जन्मिनु तर आमा हुन नसक्नु, कति दुखदायी होला। आमा हुन नसक्नुको पीडासहित नमरुन्जेलसम्म आलोचित भएर जीवन व्यतित गर्नुपर्ने। उब्जनी नहुने बाझो खेतसँग तुलना गर्दै असभ्य तरिकाले बाझी महिलाको उपमा दिइन्छ। अनि सभ्य भाषामाचाहिँ अपूर्ण महिला भनि। महिला भएर जन्मनु नै आफैँमा पूर्णता हो। बच्चा जन्माउन सक्नु या नसक्नु फरक कुरा। यहाँ त कमजोरी चाहे पुरुषकै होस्, बाझो हुनुको आरोप पनि महिलाले नै खेप्न पर्छ। बुझ्न नसकिएको कुरो, बच्चा जन्माउँदैमा मात्रै महिला कसरी पूर्ण हुन्छिन्? के बच्चा पैदा गर्नका लागि मात्रै महिला यो धर्तीमा आउँछिन्? हो आमा हुनसक्ने क्षमता केवल महिलामा मत्रै निहित रहन्छ तर आमा हुनु वा हुन सक्नुमात्रै महिला हुनुको सम्पूर्णतासँग जोडिनु बिल्कुलै गलत सोचको उपज हो। यदि आमा हुनुलाई मात्रै महिला हुनुको पूर्णतासँग जोड्ने हो भने ती महिलालाई कसरी आमा भनि सम्मान गर्ने जसले जन्म पश्चात आफ्नो शिशु ‘फोहोर मलाई’ लेखिएको फोहोर फाल्ने डब्बामा फोहोर जसरी फाल्छिन् या आफ्नै हातले घाँटी रेटी मार्छिन्। यसको ठीक विपरित केही विकसित मुलुकका केही महिला जो आामा हुन प्राकृतिकरुपमा क्षमतावान् हुन्छन् तर अनाथ बालबालिका एडप्ट गर्छन्, अनाथ बच्चालाई आफ्नै काखबाट जन्मिए बराबर नै माया ममता प्रदान गर्छन्।
आमा हुनु गर्भधारण गर्नु र शिशु जन्माउनुमात्रै होइन। आमा हुनुलाई केवल महिलाको जैविक पक्षसँगमात्र जोडिनु हुँदैन। आमा हुनु जैविक पाटो त एउटा भयो नै, संगसंगै बढी महत्वपूर्ण पाटो आमाद्वारा प्राप्त हुने मातृत्व पनि हो। वास्तविक आमासँग मातृत्व जोडिएको हुन्छ। र मातृत्व भन्ने कुरा कुनै पनि महिलामा निहीत रहन सक्छ चाहे कुनै महिलामा गर्भ धारण गर्ने क्षमता होस् या नहोस्। त्यही अन्तरनिहीत मातृत्वका कारणले नै एउटी महिला अनाथ बच्चा एडप्ट गरेर आमा बन्न सक्छिन्। विश्वमा जति पनि प्रख्यात व्यक्तित्वहरु छन् या जो छैनन् पनि, कुनै न कुनै रुपमा आमाले प्रदान गर्ने मातृत्वकै कारण हो। आमा छिन् र त यो संसार छ। आमा छिन् र त प्रत्येक जीवित प्राणी यो संसारमा आउन पाएको छ। आमा शब्द त्यसै सम्मानित र वजनदार भएको होइन।
थारू म्यागेजिनः गोचालीदेखि चली गोचालीसम्म
- कृष्णराज सर्वहारी
२०२८ सालमा दाङबाट प्रकाशित गोचाली थारू भाषाको पहिलो पत्रिका हो । अनियमित भए पनि समसामयिक बिषयबस्तु समेट्ने गरी म्यागेजिनको स्वरुप ग्रहण गर्ने प्रयास हाल गोचालीले गरिरहेको छ । २०३३ सालमा थारू कल्याणकारिणी सभाको मुखपत्रको रूपमा थारू संस्कृति प्रकाशित भयो । २०६४/६५ मा केही समय माासिक रुपमा समेत प्रकाशित भई म्यागेजिनको रुपमा थारू संस्कृति देखियो । सङ्ख्यागत रूपमा हेर्दा छयालिसको आन्दोलन अघि गोचाली (दाङ), थारू संस्कृति र बिहान, (काठमाण्डौ), औँकश (नवलपरासी), हौली (मोरङ), थारू सँस्कार (सप्तरी), टेंस (बाँके), टेम्ह्री (कैलाली) हमार संस्कृति तथा फुन्गी (चितवन) गरी जम्मा १० ओटा म्यागेजिन प्रकाशित देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित म्यागेजिनमध्ये छयालिसको आन्दोलनअघि प्रकाशित बिहान एकमात्र म्यागेजिन हाल नियमित छ । छयालिसको आन्दोलनपछि भने खासगरी पश्चिमी क्षेत्रबाट बढी थारू म्यागेजिन प्रकाशनको लहर आएको देखिन्छ । २०५४ सालमा केन्द्रीय स्तरमा थारू बिद्यार्थी समाज गठनपछि सोही समाजको बिभिन्न जिल्ला समितिले छुट्टाछुट्टै स्मारिका खाले म्यागेजिन प्रकाशित गरे, तर निरन्तरता पाएन ।
यस आलेखमा मूल रुपमा प्रकाशनको करीब पाँच अंक पार गरेका थारू म्यागेजिन प्रकाशनको मिशन के हो ?, थारू म्यागेजिनले भोग्नुपरेको खास चुनौती के हुन् ? तथा तिनले के कस्ता समसामयिक बिषयबस्तु समेटेका छन् ? भन्नेबारे मूल रुपमा तीन खण्डमा उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ । चुनौतीको प्रसंगमा अनिमियतिताको रोग, लगानीकर्ता तथा विज्ञापनको अभाव र अब्यवस्थित वितरण प्रणाली उपशीर्षकमा चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै बिषयबस्तुको प्रसंगमा परम्परा, संस्कृति झल्किने आवरण, साहित्यिक स्तम्भ तथा अन्य बिषयबस्तु उपशीर्षकमा चर्चा गरिएको छ । र, अन्त्यमा छोटो टुंग्याउनीमार्फत लेखको बिट मारिएको छ । यसरी समग्रमा थारू म्यागेजिनको सामान्य अवस्था चियाउने प्रयास गरिएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा मिशन पत्रकारिता गरेको गोचाली प्रकाशनको पहिलो अंकबाटै प्रशासनको बक्रदृष्टिमा प¥यो । गोचालीले सर्वसाधारण किसानहरुको मोहियानी हक लगायतको बिश्लेषणमूलक आलेखलाई स्थान दिदै जमिन्दार शोषकहरु बिरुद्ध लड्न आह्वान गरेको थियो । गोचालीका सम्पादकमध्ये एक सगुनलाल चौधरीको संयोजनमा पछिल्लो समयमा प्रकाशन भैरहेकोमा उनलाई सेनाले २०५८ साल पुस १२ गते बेपत्ता पारेपछि यसको प्रकाशन अझ अनियमित भएको हो (चौधरी, २०६२ः ३०) । गोचालीको पछिल्लो पन्द्रऔं अङ्कसम्म प्रकाशित भएको छ । गोचाली पञ्चायती व्यवस्थाको बिरोधमा जनचेतना जगाउन प्रगतिशील युवाहरूको जमातले निकालेको पत्रिका थियो । यसले जमिन्दार शोषकहरूको अन्याय अत्याचारको बिरोध, मोही किसानहरूको वकालत गर्ने जुन बिषयबस्तुलाई प्राथमिकता दिएको थियो, त्यस्तो वकालत हालको पत्रिकाले गर्न सकेका छैनन् ।
२०४९ सालमा गोचाली परिवार कैलालीको मुखपत्रको रूपमा मुक्तिक डगर (मुक्तिको बाटो) बार्षिक पत्रिका जोखन रत्गैंयाको सम्पादनमा निस्कियो, जसले गोचाली पत्रिका प्रकाशनको उद्धेश्यलाई आक्रमक ढंगले लग्यो । २०५३ साल चैतमा गोचाली परिवार कैलालीले नै आफ्नो सहप्रकाशनको रूपमा जोखन रत्गैंयाको सम्पादनमा थारू मुक्ति साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गरेयो । मुक्तिक डगरले समेटेका बिषयबस्तु हेर्दा माओवादीको मुखपत्र थियो भन्न सकिन्छ । यसको आवरणमा नै दुई हातमा हतकडी लगाइएको स्केच छ । यद्यपि मुक्तिक डगरले गोचाली परिवार जिल्ला संगठन समिति कैलालीको मुखपत्रको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । मुक्तिक डगर र थारू मुक्ति साप्ताहिक सम्बद्ध सदस्यहरूलाई २०५८ मंसीर ८ को संकटकालपछि खोजी खोजी पक्राउ गरियो । यसरी बर्दिया र कैलालीमा क्रियाशील गोचाली परिवारलाई कारबाही गरिएपछि पश्चिम नेपालको थारू पत्रकारिता मात्र होइन, थारू भाषा साहित्य उत्थानमा समेत ठूलो धक्का लाग्यो । गोचाली पञ्चायती व्यवस्थाको बिरोधमा तथा मुक्तिक डगरले राजतन्त्रको बिरोधमा मिशन पत्रकारिता गरेको देखिन्छ ।
तालिका–१ का अन्य म्यागेजिनको उद्देश्य हेर्दा थारू संस्कृति त थारू कल्याण कारिणी सभाको मुखपत्र नै भइहाल्यो । टेंस र हमार पहुरा क्रमशः महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्ज र दाङमा अध्ययनरत थारू बिद्यार्थीहरुको समूहबाट प्रकाशन भएकोमा त्यही अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुका सिर्जना प्रकाशन गर्ने मञ्च थियो । एफएम रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालक रहेका सोम डेमनडौराको सम्पादन, प्रकाशनमा आएको सरासर मा आफ्ना कार्यक्रममा प्रसारण गरेका सामाग्रीलाई प्राथमिकता दिने, त्यसमा पनि बाँके, बर्दियाका स्रष्टाहरुको रचना समेट्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।उकुँवार भेट बिशुद्ध साहित्यिक म्यागेजिन हो भने अग्रासन समाचारमूलक । दुई युवा समूह प्रगतिशील थारू युवा संगठनबाट चिरखा तथा थारू युवा परिवारबाट बिहान प्रकाशन भए पनि यसमा युवावर्गलाई लक्षित गरिएको खुराक पाइदैन । बिहान भने शुरु शुरुको अंकमा बिशुद्ध साहित्यिक देखिएकोमा पछि यसले साहित्यसँगै समसामयिक बिषयबस्तुलाई बढी जोड दिएको छ । गोचाली र मुक्तिक डगरले जसरी ब्यवस्था बिरुद्धमा एकखाले मिशन पत्रकारितामा आफूलाई उभ्याए, उकुँवार भेटले बिशुद्ध साहित्यिक म्यागेजिनको रुपमा चिनायो, अन्य म्यागेजिनले आफ्नो निश्चित उद्धेश्य राखेको देखिन्न ।
थारू म्यागेजिनमा देखिएका चुनौती केलाउँदा लामै सूचि बन्न सक्ला । तर अनियमित हुने रोग, लगानीकर्ता तथा विज्ञापनको अभाव र अब्यवस्थित वितरण प्रणाली यी तीन पक्षमा मात्र केन्द्रित रही यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
पहुरा दैनिक, लौव अग्रासन, परगा, सिरुवा साप्ताहिकजस्ता समाचारमूलक पत्रिकाबाहेक चारओटा पत्रिकाले मात्र दश अंक पार गर्न सकेका छन् । जसमा गोचाली (दाङ), थारू संस्कृति र बिहान (काठमाण्डौ) अग्रासन (बाँके÷दांग) पत्रिका हुन् । त्यस्तै, प्रगतिशील थारू युवा सङ्गठन, काठमाडौँको चीरखा मासिक (२०४७), थारू बिद्यार्थी परिवार नेपालगञ्जको टेंस (२०४८), गोचाली परिवार कैलालीको मुक्तिक् डगर (२०४९), धनगढी कैलालीबाट उँकुवार भेंट मासिक (२०६१), बर्दियाबाट सोम डेमनरौराको सम्पादनमा त्रैमासिक सरासर (२०६१) सात अंकसम्म प्रकाशित पत्रिका हुन् तर यी सबै अनियमितताको रोगले ग्रस्त छन् (हेर्नुहोस्ः तालिका १) ।
तालिका १ पाँच अंक पार गरेको थारू म्यागेजिनको नामावली
काठमाडौँ बसोबास गर्ने पश्चिमा थारूहरूले थारू परिवार गठन गरी २०४६ सालमा बिहान म्यागेजिन निकाले । २०७२ सालसम्म यसको २० अंक प्रकाशित छ । तालिका १ हेर्दा हाल बिहानमात्रै हाल नियमितको सूचीमा देखिन्छ । तर दर्ता पक्रियामा पनि नगएको यो म्यागेजिन कहिलेसम्म नियमित हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । संकटकालमा गोचाली प्रकाशन कैलालीको मुक्तिक डगर (मुक्तिको बाटो) पत्रिकासँग सम्बद्ध जोखन रत्गैंया र जगत रत्गैंया मारिएपछि यो पत्रिका सधैंका लागि बिलायो । आइँख मासिकका सम्पादक सौरभकुमार चौधरी चिरखामा समय दिनुपरेकाले आइँख बन्द भएको जानकारी दिन्छन् । चिरखा मासिकका ब्यवस्थापक सियाराम चौधरीका अनुसार गाउँमा पठाइएका म्यागेजिनको रकम आएन, विज्ञापनको जोहो भएन, केही मुख्य हर्ताकर्ताहरु राजधानी छाडेकाले बन्द भयो । टेंस र हमार पहुरा क्याम्पस पढ्ने बिद्यार्थीहरुको समूहबाट सञ्चालित हुँदा प्रत्येक बर्ष ब्यवस्थापन, सम्पादन परिवर्तन भैरहनाले स्वतः अनियमित हुने नै भए । अग्रासन मासिकसँग सम्बद्ध ब्यवस्थापन, सम्पादन समूहले लौव अग्रासन साप्ताहिक शुरु गरेपछि मासिक स्थगित गरियो । सरासर त्रैमासिकलाई पछि मासिक बनाइएकोमा सम्पादक÷प्रकाशक सोम डेमनरौरा संस्थामा आबद्ध भएपछि अनियमित भयो ।
पञ्चायतकालमा करिव आधा ६ अङ्क मात्रै निस्किएको थारू संस्कृति म्यागेजिन राजकुमार लेखी महामंत्री छँदा उनको सम्पादनमा २०६४-६५ मा मासिक रूपमा समेत प्रकाशित भयो । थारू संस्कृतिलाई बार्षिकबाट पछि मासिक बनाइए पनि थारू कल्याणकारिणी सभाको मुखपत्र भएर पनि स्थगित छ । हाल बर्दियाबाट माया चौधरीको सम्पादनमा डंगौरा भाषामा अख्वारी (२०७२) तथा कारी महतोको सम्पादनमा चितवनीया भाषामा संहाती द्वैमासिक (२०७१) म्यागेजिन २-२ अंक प्रकाशित भएको छ । यी पनि अनियमित छन् । बिशुद्ध थारू भाषाको यस्ता पत्रिका निकाल्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने जरुरी छ ।
लगानीकर्ता र विज्ञापनको अवस्था
क्याम्पस पढ्ने क्रममा तथा अन्य ब्यावसाय गर्ने क्रममा पत्रकारिताको महत्व बुझ्नेहरुको सामूहिक सोंच र थोरै लगानीमा म्यागेजिन प्रकाशन गरिने हुँदा यसको दिगोपन हुन सकेको छैन । काठमाण्डौ रजिष्ट्रार कार्यालयमा गुर्बाबा प्रकाशन प्रालि दर्ता गरी नेपालगंजबाट प्रकाशित अग्रासन मासिक शुरुको दुई अंक रंगीन कलेबरमा निकै तामाझामका साथ आएको थियो । तर सीमित बीउ पूँजी सकिनाले श्यामश्वेत र दुब्लाएको अवस्थामा तेश्रो अंकमा टुपुल्कियो । यो निकै उत्कृष्ट म्यागेजिनको रुपमा आएको बिश्लेषण छ थारू भाषा लोकसंस्कृतिबीद् अशोक थारूको । अग्रासनको पहिलेको सम्पादन समूहले भाषा संस्कृतिमा राम्रो बहसको शुरुवात गरेको थियो तर पछिल्लो ब्यवस्थापनले थारूहरुको राम्रा उपर्युक्त मुद्दा उठान गर्न सकेन । यसको निरन्तरता नै ठूलो कुरा भयो । अग्रासन मासिक संचालन गर्ने समूहले नै लौवा अग्रसान साप्ताहिक प्रकाशन थालेपछि मासिक बन्द गरियो ।
बिभिन्न जिल्लाबाट बार्षिक अद्र्धबार्षिक त्रैमासिक, मासिक नाम दिएर फाट्टफुट्ट थारू म्यागेजिन नयाँ, पुराना प्रकाशन हुने क्रम जारी छ । तर प्रतिबद्ध लगानीकर्ता तथा विज्ञापनको अभावमा कुनै नियमित हुन सकेका छैनन् । थारू म्यागेजिन जुन जिल्लाबाट प्रकाशित हुन्छन्, त्यही जिल्लामा सीमित हुने गरेका छन् । लावा डग्गर त्रैमासिकका सम्पादक छविलाल कोपिला थारू सम्पादकहरुको भेला गरी एकिकृत म्यागेजिन प्रकाशन गर्न सके निरन्तरताको सम्भावना देख्छन् । एउटा अंक प्रकाशन गरेर सेलाउनु सट्टा प्रत्येक जिल्लाको बिशेषांक रुपमा प्रकाशन गरी सबैले बजार प्रबद्र्धन गर्नसके एउटा गति लिने थियो कि ?
दाङदेउखुरीको लमहीमा कुसुम्या छापाखाना सञ्चालन गरेका बालगोविन्द चौधरीले देउखुरी दैनिक र राप्ती खबर साप्ताहिक नेपाली भाषाको पत्रिका सम्पादन÷प्रकाशनमा हात हाले । उनले थारू पत्रिका, म्यागेजिन प्रकाशनमा ध्यान दिएनन् । थारू पत्रिका, म्यागेजिन प्रकाशनमा संग्लग्न हुनेहरुको कुरा सुन्दा बजार नभएको तथा विज्ञापन दिनेले आनाकानी गर्नाले त्यसमा आफूले हात नहालेको उनको भनाइ छ । यसरी प्रेस ब्यवसायमा हात हालेका केही थारू उद्योगीहरुले पनि थारूभन्दा नेपाली पत्रकारितालाई महत्व दिनाले थारू पत्रकारिता उकासिन सकेको छैन ।
थारू भाषामै कलम चलाउनेहरुको पनि कमी छ । विद्यालय, क्याम्पस तहसम्म नेपाल भाषामै पठन पाठनमा पढ्ने बाध्यता भएकोले बोलीमा थारू भाषाको प्रयोग भए पनि लेखनमा यसको अभ्यास नगर्ने, मातृभाषा थारूमा लेखन नै सर्दैन भन्नेहरु धेरै देखिन्छन् । रचना जुटाउने समस्याले पनि थारू म्यागेजिन नियमित हुन सकेका छैनन् । बिहानको अघिल्लो ब्यवस्थापन पनि यसको भुक्तभोगी छ । कारण लेखरचनाको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा कुनै थारू पत्रिका प्रकाशन समूह सक्षम छैन । बिहानले २०५६ को अंकमा रचना पठाउन आह्वान गर्दै भनेको छ– आर्थिक गर्जाे टार्न चन्दा संकलन गर्न गाह्रो छैन । तर रचना जुटाउन साह्रै गाह्रो छ । यसरी ब्यावसायिक लगानीकर्ताको अभावमा पनि थारू पत्रिका नियमित छैनन् ।
छापाको तुलनामा थारू रेडियोकर्मी बढी छन् । तर थारू रेडियोकर्मीहरु प्रायः मनोरञ्जन तथा साहित्यिक कार्यक्रममा बढी छन् भने समाचार शाखामा भए पनि अनुवाद गरेर थारू समाचारको बाचन गर्ने कार्यक्रममा नै सीमित छन् (सर्वहारी, २०६५ः२२३) । यसैले थारू रेडियोकर्मीबाट पत्रिकाको लेख रचनाको आशा गरिने ठाउँ हाललाई छैन ।
थारू संस्कृति म्यागेजिनमा २०३५÷३६ सालतिरकै अंकमा सरकारी विज्ञापनको भरमार देखिन्छ । उसले राजाको जन्मोत्सवमा शुभकामना विज्ञापन जुटाएको देखिन्छ । तात्कालिन महान्यायधिवक्ता रामानन्द प्रसाद सिंह थारूको सम्पादनमा निस्किने भएकोले पनि उसलाई विज्ञापन जुटाउन सहज भएको थियो तर हाल आएर थारू म्यागेजिनलाई आफ्नै समुदायका सांसद, मन्त्री तहसम्म पुगेको ब्यक्तिले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कुनै रुपले सहयोग गर्ने गरेका छैनन् । वास्तवमा जबसम्म सोही समुदायका अगुवाहरूले यसबारेमा चासो दिँदैनन्, म्यागेजिनको स्थिति उकासिदैन ।
हाल स्थगित परगा थारू साप्ताहिकका सम्पादक सोम डेमनडौरा थारू पत्रिकाले बजार लिन नसक्नुको कारण भाषीक पत्रकारिताको लागि सरकारी नीति प्रष्ट नुहुनु, बिद्यालयमा थारू भाषा माध्यमको रुपमा पठनपाठन नहुनु, सरकारी कार्यालयमा थारू भाषाको प्रयोग नहुनु, मिडिया समाज जागरणको सशक्त माध्यम हो भन्ने सोचाई राख्ने सचेत थारू बर्गले लगानी गर्न हिच्काउनु रहेको देख्छन् । सरकारी र गैसरकारी निकायहरुबाट पनि बिस्तारै म्यागेजिन प्रकाशनमा सहयोग गर्ने बाताबरण पैदा हुँदै गएकोले उनी थारू म्यागेजिनको भबिष्य भने राम्रो देख्छन् (कुराकानीमा आधारित) ।
सरकारी बिज्ञापनमा असमानजनक नीतिले थारू भाषाको पत्रिका मारमा परेको अनुभव छबिलाल कोपिलाको छ । ‘तपाईहरुको पत्रिका सबैले बुझ्दैनन्’ गुनासो गर्दै नेपाली भाषाकोभन्दा अत्यन्त थोरै रकमको बिज्ञापन पाइन्छ– उनले भने (कुराकानीमा आधारित) । पश्चिमा क्षेत्रमा डंगौरा संगसंगै राना, कठरिया, देशौरी लगायत थारूका बिबिध भाषिकामा पत्रिका प्रकाशन देखिनुले थारू म्यागेजिन प्रकाशनमा पनि उत्साह देखिन्छ । तर उही अनियमितताको समस्याले नै सबै ग्रष्ट छन् ।
अग्रसान मासिकका सम्पादक श्रीराम चौधरी थारू मिडियाकर्मीहरुबीच समन्वय र सञ्जालको अभावले तथा प्रकाशनमा संलग्न हुनेहरुको प्रतिबद्धताको अभावले थारू म्यागेजिनले निरन्तरता नपाएको देख्छन् । सोही मासिकको सहसम्पादकको अनुभव संगालेका नरेशलाल कुसुम्या म्यागेजिनकै आम्दानीबाट सम्पादक, ब्यवस्थापक पालिने अवस्था नहुँदासम्म थारू मात्र होइन, अन्य भाषाभाषीको म्यागेजिनको पनि भविष्य उज्ज्वल नरहेको बिचार राख्छन् (कुराकानीमा आधारित) । तर थारू म्यागेजिनको सवालमा यो बिचार पनि आकाशको फल आँखा तरि मरझैं हो । कारण बर्षमा एउटा मात्र अंक निकाल्न हम्मे हम्मे पर्ने स्वयमसेवी लगानीकर्ताहरुले सम्पादक, ब्यवस्थापकहरुलाई पारिश्रमिक दिने अवस्था नै छैन ।
अब्यस्थित बितरण प्रणाली
थारू म्यागेजिन गाउँघरसम्म त पठाइन्छ तर व्यावसायिक ढङ्गले प्रकाशन गरिरहेका म्यागेजिन पनि बजारमा स्टेशनेरी पसलमा झुण्ड्याइएको सम्म देखिन्न । पत्रिका÷म्यागेजिन प्रकाशकहरुको सोंचाइमा बजारसम्म गएर पढ्ने पाठक छैनन् । शौखको रूपमा क्याम्पसबाट निकालिने स्मारिका सरह म्यागेजिनको हालत झन् कस्तो होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । बिसं. २००५ सालमा स्थापित नेपालको जेठो संस्था थारू कल्याण कारिणी सभाको मुखपत्र थारू संस्कृति पत्रिका २०३३ सालबाट प्रकाशन आरम्भ भएको हो । सभाको महामंत्री छँदा पछिल्लोपटक २०६४ सम्म म्यागेजिनको सम्पादक रहेका राजकुमार लेखी म्यागेजिन नियमित नहुनुमा सभाको कार्यसमिति जिम्मेवार रहेको जनाउँछन््– ‘प्रकाशनका लागि खर्च नै छुट्ट्याइएको छैन । सम्पादक एक्लै दौडेर विज्ञापन जुराउने कि लेख रचना ? पत्रकारितामा मेरो स्वयम् रुचि भएकोले बार्षिकलाई कुनै समय मासिकसम्म बनाएँ । भूगोलपार्क तथा राजधानीका स्टेशनरीमा आफै म्यागेजिन पु¥याएँ, पत्रिका पसलमा केही बिक्री पनि हुन्थ्यो । तर एक्लै खटिदा सम्भव नहुँदो रहेछ ।’(कुराकानीमा आधारित) । यसरी ब्यावसायिक शैलीमा केही समय स्टेशनेरी पसलमा झुण्ड्याइए पनि थारू संस्कृतिको अवस्था कति सम्म छ भने अनुसन्धानको लागि थाकसको केन्द्रिय कार्यालयमा संकलन गर्न गएमा म्यागेजिनको कुनै एक अंकसम्म पाइन्न । २०६९ सालदेखि थारू संस्कृति स्थगित छ ।
थारू संस्कृतिको सम्पादनमा संलग्न रहिसकेका कवि सियाराम चौधरीको बिचारमा थारू म्यागेजिनको बजार ब्यवस्थापनको समस्या नै अनियमित हुनुको प्रमुख कारण हो भन्छन्– थाकसको संगठन २४ जिल्लामा बिस्तार छ । यसको मुखपत्र थारू संस्कृतिलाई प्रत्येक जिल्ला शाखाले ५०/५० ओटा मात्रै बिक्रीको जिम्मा लिने हो भने १२ सय पत्रिका स्वतः खपत हुन्छ, यसले बजारको कुनै समस्या पर्दैन । तर जिल्लामा पठाइएको पत्रिकाको कुनै
१.थरूहट क्षेत्रका स्टेशनरी पसलमा मैले थारू पत्रिका, म्यागेजिन बिगत दुई दशक पहिलेदेखि नै संकलन गर्दै आएको छुँ । गोचाली पत्रिका २०४७ सालको अंक मैले जनता बुक स्टल, घोराहीबाट संकलन गरेको हुँ । संकलनमा यो अपवादबाहेक मैले कुनै थारू पत्रिका स्टेशनरीमा फेला पार्न सकेको छैन । चिरखा मासिकले तेश्रो अंक (२०४८, बैशाख) मा २१ स्थानमा पत्रिका पाइने ठेगाना दिएको छ, जसमा अपवादको रुपमा झापाको एक मात्र स्टेशनरी पसलको नाम पाइने ठेगानामा रहेको छ, बाँकी ब्यक्तिगत र संघसंस्थाको नाम रहेको छ । उँकुवार–भेंट मासिकले पनि पत्रिका पाइने सात स्थानको नाम दिएको छ, जसमा चलचित्र हलदेखि एग्रोभेट, होटेल सम्मको नाम छ तर स्टेशनरी पसलको नाम छैन । स्टेशनरी पसलेहरु प्रायः गैर थारूका नै छन् । उनीहरुले शुरुमा राख्नै नमान्ने, राखीहाले नझुण्ड्याई लुकाएर राख्ने भएकोले नदिएको लावा डग्गरका सम्पादक छविलाल कोपिला बताउँछन् ।
हिसाबकिताब आउँदैन ।’ (कुराकानीमा आधारित) यसरी पत्रिका प्रकाशन गर्ने समूह देखिएपनि उचित बजार ब्यवस्थापन नहुँदा एक÷दुई अंकमै प्रायः पत्रिका हराउने रोगले ग्रस्त देखिन्छन् ।
कुनै पनि भाषिक समुदायले म्यागेजिन, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नुको मूल उद्देश्य भाषा संस्कृतिको जगेर्ना पनि एक हो । बिहान, हमार पहुरा, उँकुवार–भेंट लगायत अन्य थारू म्यागेजिनको पहिलो अंकको सम्पादकीय पढ्दा त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर हाल आएर यो पक्षमा पनि बिचलन आएको देखिन्छ । २०६८ बाट प्रकाशित हुन थालेको इजोत म्यागेजिनले हालसम्म प्रकाशित असोज, कार्तिक, मंसिर यी तीन अंकमा सम्पादकीय थारू भाषामा लेखेर थारू भाषाको म्यागेजिनको पहिचान दिन खोजेको छ तर यसका भित्री सामाग्री बढी नेपाली तथा केही अंग्रेजीमा समेत छन्। २०६३ सम्म बार्षिक छँदासम्म थारू संस्कृति म्यागेजिनमा थारू भाषा मात्रै छापिन्थ्यो । तर मासिक रुपमा आउन थालेपछि बिस्तारै नेपाली भाषामा बढी सामाग्री आउन थाल्यो । यसको २०६५ जेठको अंकमा त सम्पादकीय लगायत पूरै सामग्री नेपाली भाषामा रहेको छ । त्यस्तै, चली गोचाली मासिक (२०७१) को पनि सम्पादकीय र अपवादको रुपमा मात्र केही लेख थारू भाषामा छ, बाँकी सामाग्री नेपाली भाषामै छ । यसरी भाषाभन्दा पनि थारूका बिषयगत मुद्दालाई इजोत, थारू संस्कृति, चली गोचालीले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । झापादेखि कंचनपुर सम्मका थारूहरुले एकले अर्काको भाषा बुझ्न कठिन छ । त्यसैले, आफ्नै समुदायलाई जोड्न तथा गैर थारूहरुलाई आफ्ना मुद्धा बुझाउन पनि थारू केन्द्रित गैरथारू भाषाको म्यागेजिन जरुरी छ ।
थारू पत्रपत्रिकाको विगत र वर्तमान (सर्वहारी, २०६४) लेखमा थारू पत्रपत्रिकाले समेटेका बिषयबस्तु केलाउँदा भाषा, चाडपर्व÷संस्कृति, राजनीति तथा साहित्य यी चार बिषयलाई मुख्य रुपमा इंगित गरिएको छ । यसरी थारू म्यागेजिनमा पनि राजनीतिक बिश्लेषणलगायत समसामयिक बिषयबस्तुका अलावा साहित्यको खुराक नै बढी भेटिन्छ । यहाँ थारू म्यागेजिनले समेटेका बिषयबस्तुबारे बुँदागत रुपमा चर्चा गरिन्छ ।
परम्परा, संस्कृति झल्किने आवरण
म्यागेजिनको पहिलो आकर्षण भनेको यसको आवरण सज्जा हो । थारू म्यागेजिनमा आवरणको सवालमा शुरुवातकालमा प्रायः सबैले प्रत्येक अंकमा स्केच गरिएको एउटै आवरण दोह्¥याए पनि पछि केहीले सुधार गरेको पाइन्छ । गोचालीले शुरुका अंकमा गोचाली नाम मात्र आवरणमा राखेको छ । पछि केही तस्बीरलाई स्थान दिए पनि कभर डिजाइनमा ध्यान नदिदा ती प्रभावकारी छैनन् । हमार पहुराले शुरु शुरुको अंकमा पुरुष ब्यक्तिले काँधमा कोशेली बोकेको स्केचलाई आवरण बनायो । हमार सनेशमा पुरुष ब्यक्तिले काँधमा र महिलाले टाउकोमा कोशेली बोकेको तथा उँकुवार भेटमा पनि महिलाले टाउकोमा कोशेली बोकी छोरीलाई डो¥याइरहेको स्केच आवरणमा छ । रेडियो नेपालले २०५१ सालबाट रेडियोमा थारू कार्यक्रम चलाउँदा पनि पहुरा (कोशेली) नै नाम जुराएको छ । तर आफ्ना खास पाठकले कस्ता कोशेली चाहन्छन् ? थारू भाषा म्यागेजिन प्रकाशनमा सम्बद्ध हुनेहरूले यो पक्षमा चिन्तन गरेको पाइन्न । २०४६ देखि २०५६ सम्मको अंकमा लगातार पहाडको कन्दराबाट सूर्य उदाएको दृष्यमात्र एक कलरमा आवरणमा बिहानले सजायो । २०५७ पछिको अंकबाट बल्ल भित्री सामग्रीमा रहेको बिषयबस्तुलाई आवरणमा स्थान दिई रंगीन कलेबरमा पूर्ण म्यागेजिनको रुपमा आउन थाल्यो ।
भित्री सामाग्रीमा सम्बन्धित बिषयबस्तुबारे थोरैमात्र जानकारी रहेपनि परम्परागत संस्कृति झल्किने नाचगान तथा गरगहनाले सजिएका थारू महिलाको तस्वीर नै म्यागेजिनको आवरणमा राख्न रुचाउने गरेको देखिन्छ ।अग्रासन मासिकले २०६१ माघको अंकको आवरणमा नाचगान र परम्परागत गरगहनाले सजिएकी थारू महिलाको तस्वीर राखेको छ । तर यसको भित्री सामाग्रीमा नाचगानबारे कुनै चर्चा छैन । बिहानले २०५७ अंकको आवरणमा नाचगान र परम्परागत पोशाकमा राना थारू महिलाहरुको तस्वीर आवरणमा राखेको छ । तर राना थारू महिलाहरुको बारेमा कुनै सामाग्री छैन । बिहानले २०६७ र २०६८ अंकको आवरणमा पनि क्रमशः नाचगान तथा परम्परागत गरगहनाले सजिएकी थारू महिलाको तस्वीर राखेको छ । अरु त अरु आमम्यागेजिनले पछ्याएको नाचगान तथा परम्परागत गरगहनाले सजिएकी थारू महिलाको तस्वीर आवरणमा राख्ने मोह थारू पत्रकार संघको मुखपत्र फुलरिया म्यागेजिनले पनि त्याग्न सकेको देखिदैन । म्यागेजिनको आवरणको आकर्षण भन्नु नै नाचगान तथा परम्परागत गरगहनाले सजिएकी थारू महिलाको तस्वीर नै उपर्युक्त हो भन्ने सम्पादकहरुको सतही बुझाइले यस्तो भएको देखिन्छ ।
सबैजसो पत्रपत्रिकामा चाडपर्व संस्कृतिको परिचयले पर्याप्त स्थान पाएको छ । थारू जातिको प्रचलित गुरही (नागपञ्चमी), अष्टिम्की (कृष्ण जन्माष्टमी) अट्वारी, दशिया (दशैं), देवारी (तिहार), धुरहेरी (होली), चाडपर्वबाहेक खेतीपाती सकिएपछि खाइने पेंड्या, सवनिया, पानी पार्नलाई गोरु बेंढना चलनबारे उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । ती चाडपर्बमा हुने फजुल खर्चबारे टिप्पणी, मौलिक चाडको ऐतिहासिकताबारे ब्याख्या भने भेटिँदैन । थाकसले आफ्नो स्थापनाकालमा बालविवाह, बहुविवाह, फजुल खर्चको बिरोध गर्ने अभियान चालेको, बिधानमा पनि सोबारे उल्लेख गरेको भए पनि सभाको प्रकाशनथारू संस्कृतिमा यसबारे गहन लेख समेटिएको पाइन्न । थारूहरूको बारेमा थुपै्र बिदेशी तथा स्वदेशी लेखकहरूले खोज अनुसन्धान गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् तर तिनीहरूले हाम्रो बारेमा के लेख्छन् ? हाम्रो चाडपर्व, संस्कृतिबारे उनीहरूको टिप्पणी के छ ? यससम्बन्धी लेख थारू पत्रिकामा अपवादको रूपमा मात्रै भेटिन्छ (सर्वहारी २०६४ः २३÷२४) । थारू म्यागेजिन पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । म्यागेजिनले समसामयिक बिषयबस्तुमा अभिलेखीकरणको कार्य त केही हदसम्म गरिरहेका छन् तर गहन बिश्लेषणमा अझै दृष्टि पुग्न सकेको छैन । वास्तवमा सम्पादकहरू लेखकबाट जस्तो रचना प्राप्त गर्छन्, त्यस्तै प्रकाशित गर्नाले म्यागेजिनको पनि स्तर उठ्न सकेको छैन ।
शुरुमा हल्काफूल्का कथा, कविता र हल्काफुल्का लेखले सबैजसो थारू पत्रपत्रिका भरिएका छन् । पछि गहन, अनुसन्धानमूलक लेख दिने चेष्टा गरी म्यागेजिनको स्वरुप अंगालेको पाइन्छ । अग्रासनले गजल विशेषाङ्क प्रकाशन गरेको छ । बिहानले ‘सजना’ (लोकगीत), थारू लोककथा, कृष्णजन्माष्टमी तथा चुक्की (पिकनिक) जस्तो बिशेषाङ्क प्रकाशित गरी लोकसाहित्य संस्कृति विशेष स्थान दिएको देखिन्छ भने अन्यले कुनै खास संस्कृति विशेषाङ्क पनि प्रकाशन गरेका छैनन् । लोकप्रिय बिधा कथा, कविता विशेषाङ्कसमेत कुनै साहित्यिक म्यागेजिनले हालसम्म समेट्न सकेको देखिन्न । उँकुवार–भेंट मासिकले साहित्यिक म्यागेजिनको छवि बनाउँदै स्वास्थ्य स्तम्भका अतिरिक्त ‘अरबर शब्द’ (शव्द ज्ञान) कहकुट (उखान टुक्का) ‘पुछो लड्को मनके बाट जोन्हु मामासे’ (सोध केटाकेटी मनका कुरा चन्द्रमा मामासँग) आदि स्तम्भ पस्केको छ । पुछो लड्को...स्तम्भले बाल बालिबालिकालाई कविता लेख्न सिकाउन मद्दत गरेको थियो । उँकुवार–भेंट स्थगित भइसक्यो । बालबालिकालाई नै केन्द्रित गरेर राखिएको स्तम्भ थारू पत्रपत्रिकामा निकै कम छन् । साहित्यिक स्तम्भको विविधता नाटक, यात्रा संस्मरण त्यस्तै नयाँ नयाँ पुस्तक, क्यासेटबारे जानकारी दिने समीक्षा स्तम्भ पनि आक्कलझुक्कल मात्र देखिन्छ । साहित्यिक स्तम्भको चर्चा गर्दा छविलाल कोपिलाको सम्पादनमा २० अंक प्रकाशित भइसकेको साहित्यिक लावा डग्गर त्रैमासिकको महत्व बेजोड देखिन्छ ।
म्यागेजिनहरुले समेट्ने गरेको स्तम्भ खेलकूद पनि हो । बिहानमा थारू खेल, खेलाडीबारे एकाध अंकमा सामाग्री दिए पनि अन्य म्यागेजिनमा पाइन्न । थारू चलचित्र, रंगमञ्चबारे पनि कमै सामग्री छन् । थारू जाति पछि प¥यो, छोरीलाई पनि छोरा सरह पढाऔँ, कमैया कमलह्रीहरूको ब्यथा, जाँडरक्सी कम गरौँ, गुरुवा धामीभन्दा अस्पताललाई प्राथमिकता आदि जस्ता जनचेतनामूलक बिषयबस्तु प्रायः म्यागेजिनमा समेटिएका छन् । तर यस सम्बन्धमा समेटिएका सामाग्री पनि सतही छन् । फिचर, रिपोर्टका रूपमा आउनुभन्दा सामान्य लेख रचनाका रूपमा ती विषयबस्तुलाई स्थान दिइएको छ ।
थारू जाति पछि पर्नाका कारण के के हुन् ? कुन पक्षमा सुधार गरे यो समुदायको उन्नति हुन्छ । छोरीले उन्नति गरेर बाउआमा पालेको उदाहरण कहाँ छ ? कुन कमैया कमलह्रीलाई कुन जमिन्दारले किन र कसरी दुःख दिए ? मुक्ति पाएको थोरै समयमा कुन मुक्त कमैया परिवारले उन्नति ग¥यो ? जाँडरक्सीको सेवनले नै थारू समुदाय पछि परेको हो त ? गुरुवाले गलत सल्लाह दिँदा कहाँका बिरामीलाई अभर पा¥यो । यस्ता फिचर, खोजमूलक समाचारको अभाव छ (सर्वहारी २०६४ः २७÷२८) । मूल रुपमा थारू कृषि पेशामा आधारित समुदाय हो तर कृषिसम्बन्धी गहन लेख रचना, समाचार, सफल कृषकहरुको कथा सामाग्री थारू म्यागेजिनमा अपवादको रुपमा छ ।
थारू म्यागेजिनको सन्दर्भमा सबैभन्दा अहम् सवाल भनेको यसको नियमितता के गरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । सर्बप्रथम विक्री वितरण प्रकृयालाई सुधार गर्ने हो भने थारू पत्रिकाको आयु लम्मिन सक्छ । २४ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको थाकसको मुखपत्र थारू संस्कृति यथाशिघ्र नियमित हुनु आवश्यक छ । आफ्नै लगनशिलता तथा ‘टीम वर्क’को अभावमा थारू म्यागेजिनमा अनियमितताको रोग झं्यागिएको छ । थारू म्यागेजिनको सुगन्ध मगमगाउने क्रममा छ । तर अनियमितताको रोगले सुगन्ध फैलिन नपाउँदै बिलाउने गरेको छ । प्रकाशनको ४४ बर्षमा १५ अंक मात्र प्रकाशन भएको गोचालीको सास अड्किएको छ ।
थारू म्यागेजिन किन नियमित हुन सकिरहेका छैनन् ? यसको गहन लेखाजोखा हुनुपर्छ । यसका लागि थारू म्यागेजिनसँग सम्बद्ध सम्पादक, प्रकाशकहरूको राष्ट्रिय भेला हुनु जरूरी देखिन्छ । जसले थारू म्यागेजिनको अनियमितताको रोग खुट्याओस् । २०६७ चैतमा दर्ता भएको थारू पत्रकार संघले पनि यस अभियानमा सकृय भूमिका खेल्न सक्छ । बिगत दश बर्षमा थारू पत्रिकाले म्यागेजिनको काँचुली फे¥यो । दश बर्षे जनयुद्धले हजारौं थारू लडाकु पनि जन्मायो, तर एउटा सञ्चारकर्मी जन्माएन भन्न कर लाग्छ, होइन भने संकटकालमा पनि अस्तित्वमा रहेको माओवादीको मुखपत्रको रुपमा रहेको मुक्तिक डगर म्यागेजिनले लोकतन्त्रमा पुनर्जीवन पाउनु पर्ने होइन र ? थारू पत्रकारिताको पहिलो खाँबो गोचाली स्थगित छ । पछिल्लो चली गोचाली मासिक पनि अनियमित छ । यसरी गोचालीदेखि चली गोचालीसम्मको थारू म्यागेजिनको यात्रा कहिलेसम्म स्थगित र अनियमित हुने हो ? कहिले नियमित थारू म्यागेजिन भुलिकने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सर्वहारी, कृष्णराज । २०६४ । थारू पत्रपत्रिकाको विगत र वर्तमान। मिडिया अध्ययन–२ । प्रत्यूष वन्त, हर्षमान महर्जन, देवराज हुमागाई र शेखर पराजुली, सं., पृ. १–३३ । काठमाण्डौँः मार्टिन चौतारी ।
सर्वहारी, कृष्णराज । २०६५ । थारू भाषामा रेडियो कार्यक्रमः संख्यामै जोड । स्वतन्त्र रेडियोको एक दशकः विकास, बहस र सामाजिक सरोकार । देवराज हुमागाई, प्रत्यूष वन्त र कोमल भट्ट, सं., पृ. २११–२४१ । काठमाण्डौँः मार्टिन चौतारी ।
म्वार मन टुटल यात्रा ओ पत्रकारिता
रे मधेशिया क्या तु हार गया ?
आन्दोलनकारी भ्रममा नपरौं
दमन, समस्याको निकास होइन